SIDA LOO DHIGO ZUCCHINI JIILAALKA GURIGA: CUNTADA UGU FIICAN - DIYAARINTA JIILAALKA
Ugu Weyn Ee Diyaarinta jiilaalka
Jucchini barafoobaya jiilaalka guriga
Xilliga qaboobaha waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee goosashada xilliga qaboobaha, taas oo kuu ogolaanaysa inaad ilaaliso walxaha faa'iido leh ugu badnaan muddada dhammaan waqtiga fitamiin la'aanta. Intaa waxaa dheer, adoo u diyaaraaya, waxaa suurtagal ah in lagu keydiyo booska qolka ku yaala, adigoo ku haynaya ilaalin yar. Sidoo kale, waxaad badbaadin doontaa wakhti, dadaal iyo lacag, sababtoo ah geedi socodku waa mid deg deg ah oo aad u fudud, iyo khudaarta xagaaga waxay ku kacayaan wax ka yar jiilaalka.
In maqaalka ah ayaan si faahfaahin ah kuu sheegi doonaa haddii ay suurtagal tahay in la xakameynayo zucchini jiilaalka, iyo sida loo sameeyo in qaboojiyaha joogto ah.
Meelaha faa'iido leh miyaa la xafidaa marka la qaboojiyey?
Marka laga eego fitamiinada iyo tilmaanta caleemaha zucchini maaha mid gaar ah oo ka mid ah khudaarta kale.
fitamiinada - A, B, C, H, PP;
Macdanta - potassium, fosfooraska, sodium, birta, magnesium.
Tani waa badeeco yar oo calorie ah - waa 24 kcal oo keliya 100 g. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah khudaarta lagu taliyay in ay soo galaan sida cunnooyinka ugu horreeya ee carruurta yar yarMaadaama maadooyinka ay ku jiraan qeybkoodu uusan keenin xasaasiyad oo si sahlan loo naaquso habka dheef-shiidka ilmaha yar.
Iyada oo habkan this ee goosashada jiilaalka, sida barafka, zucchini, kaliya laga raray beerta, hayaa sifooyinka wanaagsan ee ugu badnaan - ilaa 80%. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto tijaabada saxda ah ee lagu keydiyo oo raaco talooyinka loogu talagalay khafiifinta saxda ah.
Xulashada alaabooyinka loogu talagalay barafka, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa tamaandhada, caleenta, bocorka, roodhida, sprouts, broccoli, boqoshaada, hadhuudhka, jeeriga, blueberries.
Nadiifiyaha casriga ah ee hareeraha hareeraheeda leh ayaa suurta gal ah in la badbaadiyo inta kudhaca maaddada fiitamiin-macdanta oo dhan iyo fitamiin C (waxay ka kooban tahay tayada tayada miraha iyo khudradda), iyo waliba urta iyo muuqaalka cuntada. Inta lagu jiro lixda bilood ee la qaboojiyey, zucchini wuxuu lumin karaa ilaa 10-15% ascorbic acid. Losses waxay la mid tahay sida badeecaddu lumiso marka lagu kaydiyo heerkulka qolka maalin.
Waa muhiim! Waqtiga ka yar ayaa ka soo baxa habka loo soo celin karo qudaar si uu u keydiyo, walxaha qiimaha badani waxay badbaadineysaa marka la qaboojiyey.
Xulashada iyo diyaarinta zucchini
Doorashada ugu wanaagsan ee loogu talagalay barafka - zucchini dhallinyaro leh maqaar iyo khafiif ah maqaarka. Waa inay yaraadaan - 12-20 cm oo dherer ah iyo miisaankoodu yahay 100-200 garaam.
Ka hor intaan la raacin, khudaarta waa in la baaraa wixii waxyeelo ah, lebbiska, boodada, calaamadaha qalafsan.
Khudaarta la goostay waa in laga saaraa. Markaas waa in si fiican loo dhaqo oo la qalajiyaa. Haddii la iibsado, waxaa lagula talinayaa in lagu rusheeyo saacad biyo ah. Si aad u qallajiso waraaqo ku habboon ama shukumaan. Haddii wakhtigu u oggolaado, markaa qalajinta waa inay qaadataa 30 ilaa 60 daqiiqo.
Haddii zucchini ma aha mid aad u yar, waa in la nadiifiyo iyaga oo ka saar miraha.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad keento khudradda gobolka oo aad qorshaynayso inaad iyaga qaboojiso: jarjar xabadaha, baararka ama qallajinta, shiil, diyaariso baradho la shiiday, iwm.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu xakameynayo zucchini. Waxaan eegaynaa afar:
jarjar gooyooyinka ama xabadaha;
qaabka baradho la shiiday.
Siyaabaha lagu keydiyo waa in la doortaa iyada oo ku xiran hadba sida aad u isticmaashid kadibna aad rabto inaad hesho khudaarta la qaboojiyey.
Ma taqaanaa? Waxaa la aasaasay in dadka si joogta ah u cunaan zucchini ay u nugul yihiin muuqaalka timo cufan.
Dhinacyada ama xabadaha
Hadda wax yar ka badan oo ku saabsan sida loo dhigo zucchini ee qaboobaha cusub. Algorithm waxqabadka waa sida soo socota:
Ku dhaq, oo la qalajiyey oo jarjar xabadaha (1.5-2 cm) ama alwaaxyada (1-1.5 cm qaro weyn), khudradda waa la qalajiyaa iyadoo la isticmaalayo tuwaal waraaq ah. Qoyaanka ka yar - tayada wanaagsan ee lagu keydiyo.
Kareemooyinka ama siddooyinku waxay ku jiraan hal lakabka boorso, saxan ama dusha kale, oo ku daboolan filim foorarsasho ah oo loo diro qaboojiyaha habeenkii. Waa muhiim in qaybaha gooyuhu is taabtaan midba midka kale.
Aroortii hore, zucchini horay loo qaboojiyey ayaa laga saaraa barafeeyaha waxaana la dhigaa meel lagu kaydiyo bacaha bacaha ama bacaha gaarka ah ee barafka lagu rido.
Marka markaasi la qaboojiyo, sheyga labaad ayaa la boodi karaa, isla markiiba ku dheji kareemada ama siddoo dhejisan hal dabaq oo ku yaal bacaha. Sidoo kale, ka hor inta aan la dhigin zucchini barafeeyaha ayaa waxoogaa cusbada laga dhigi karaa.
Waxaa jira hab kale oo tallaabooyin xaddidan lagu daray:
Ka dib marka la jarayo khudaarta, waa la jarjaray: marka hore, waxaa la dhigayaa biyo karkaraya la karkariyey saddex ilaa afar daqiiqo dabadeedna la qaboojiyey oo loo oggol yahay in la daadiyo.
Ka dib markii la jarjaray, khudaarta waxaa lagu duubaa bacaha oo loo diraa qaboojiyaha.
Xayiraadda alaabtu waxay keenaysaa xaqiiqda ah in qaybta sare ay waxoogaa yar u jilciso. Iyada oo lagu keydiyo degdeg ah, waxay u noqotaa qolof ah khafiif ah oo si fiican u ilaalineysa dhammaan saxarka iyo casiirka. Intaa waxaa dheer, waxay joojisaa hababka halsano ee saameeya dhismaha, dhadhanka iyo midabka khudaarta.
Waa muhiim! Nadaafaddu waxay ku habboon tahay in ay fuliso, khudradda ku shubeyso shaandho hana ku ridin biyo karkarsan, ka dibna weel madow leh. Sidaas darteed markiiba waxaad ka saari kartaa biyaha kulul iyo qabow. Waa muhiim in khudaarta aysan taaban barafka.
Haddii aan ka hadleyno qiyaasta, markaa hal kiilo oo khudaar ah ayaa u baahan doona in ay qaataan saddex ilaa afar litir oo biyo ah karkaraya.
Ka hor inta qaboojiyaha zucchini karaan karaan:
Zucchini oo la qalajiyey oo la qalajiyey zucchini jarjar siddooyin.
Waxaad ku shiishaa saliidda cuntada, ka hor inta aan la gelin burka.
Ku rid shaandho ama warqad shukumaan ah si aad uga takhalusto dufanka xad-dhaafka ah.
Keen heerkulka qolka.
Ku buuxsan weelasha ama baakadaha, si siman u kala qaybinta iyo sii deyn hawada.
U dir sooraha.
Ma aha lagama maarmaan in la keydiyo zucchini qaab ama ka yar oo dhan. Mararka qaar waxaa haboon in wax laga qabto waxyaabaha soo saarka ah:
Isku-tolan waa la dhaqay, la qalajiyey, diiray. Haddii loo baahdo, nadiifi abuurka.
Kala soocaan huurka celcelis ahaan.
Saxarka ayaa la dhigaa bacaha oo lagu meeleeyay barafeeyaha.
Baradhada la kariyey
Waxaa jira hab weyn oo lagu xakameynayo zucchini jiilaalka guriga loogu talagalay ilmo - kariyo baradho la shiiday.
Zucchini dhaqday, nadiifin oo jarjar xabadaha.
Ku rid biyo karkaraya oo isku karsaaraya ilaa inta ay diyaar u yihiin.
Dhererka ayaa laga soo saaraa biyaha waxaana loo oggol yahay in la daadiyo.
Marka khudaarta la qaboojiyo, waa in lagu daraa blender oo la jarjarey.
Ka dibna baradho la shiiday waxaa lagu duubaa weel yar oo caag ah (hal qayb oo midkiiba), daboolay daboolka ama filimka iyo ku rid barafeeyaha.
Ma taqaanaa? Australian Ken Dade ayaa ka saaray mishiinka adduunka ugu weyn ee adduunka 2008-dii. Miisaanka uu ahaa 65 kg.
Si loo qaboojiyo tayada, isticmaal dhawr talooyin:
Waxaa lagu talinayaa in la dhigo khudaarta loogu talagalay hal saxan oo ku jira bacaha lagu keydiyo, si aysan badeecaddu u marin qashin celinta. Xannibaadda soo noqnoqda ayaa si adag loo mamnuucay.
Markaad khudaarta ku riddo khudradda, waa inaad si buuxda uga qaaddid hawada kahor intaadan gelin qaboojiyaha. Tani waxay ka caawinaysaa caws-caleen this cocktail, kaas oo la geliyo dalool yar, oo bacda xiran ama xiran.
Qaboojiyaha, khudaarta waa in lagu hayaa meel gooni ah oo laga helo hilibka iyo kalluunka.
Baakooyinka waxaad xakameyn kartaa iskudarka khudaarta iyo caleemaha. Tusaale ahaan, haddii zucchini loo sameeyo maraqa, ka dibna waxaad ku dari kartaa dhir horay loo qaboojiyey, dill, scallions, karootada, basbaaska, iyo waxyaabaha kale. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa bariis cusbada leh. Wixii canjeelada, isku dar qasakada iyo qaboojiyaha.
Marka la qaboojiyo tiro badan oo ah khudradda, waxaa lagu dhejin karaa saxan ama saxaarado dhowr lakab, mid kasta oo ka mid ah waxaa lagu daboolayaa filim xannibaad.
Waxaa ugu fiican ee loogu talagalay bacda fareeshka.
Khudaarta cagaaran ee guriga weli waa la qalajin karaa, la kariyaa, la kariyo iyaga oo ka yimaada macaanka.
Nolosha shiilan ee zucchini barafoobay waa inta u dhaxaysa shan iyo sideed bilood, haddii la qaboojiyo degdeg ah oo degdeg ah ayaa la fuliyay. Haddii aan hore loo dhigin, khudradda waa la isticmaali karaa ilaa lix bilood.
Ma taqaanaa? Marka zucchini markii ugu horaysay lagu soo bandhigay Yurub qarnigii 16aad, markii ugu horeysay waxaa loo isticmaalay oo kaliya sida warshad ornamental, sababtoo ah waxay ku bloomed leh qurux badan, ubaxyo huruud ah.
Sida cagaarka kale, zucchini ujeeddo gaar ah u jarjarey ma aha mid u qalantaa. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku darto maraqa, ka dib markiiba ka dib markaad ka saarto qaboojiyaha waxaa lagu tuuraa biyo karkaraya.
Zucchini oo la kariyey waxaa lagu rakibay mikrowave si loogu kululeeyo. Dabadeed, waxay diyaar u yihiin inay wax cunaan.
Khudaarta, gooyaa gudaha siddooyinkeeda, ayaa la yareeyay (laakiin maaha gebi ahaanba, haddii kale waxay ujuuri doonaan), ka dibna ku dhex daadi bur iyo khudaar labada dhinac ee saliidda cuntada.
Haddii aad qorsheyneyso in aad jarjartid khudradda, ka dibna waa in lagu sameeyaa khadka hoose ee qaboojiyaha. Ka dib marka la dhamaystiro dhalaalinta, dareeraha wuxuu u baahan doonaa in la miiro. Sidaa si la mid ah, canuga waa la jarjarey, kaas oo, kahor isticmaalka, waa yar yahay kuleylka heerkulka 37 ° C.
Xakamaynta jucchini - tani waa hab sahlan oo loogu diyaariyo qabowga jiilaalka. Sidaa daraadeed waxaad naftaada u siin kartaa khudrado cusub muddada daaweynta avitaminosis oo dhan, iyaga oo isticmaalaya sida saxan dhinaca, saxaraha, maraqyada, maraqa, baradhada la shiiday, kaneecada, canjeelada, iyo digirta. Hadda waxaad kaloo ogtahay in aad xakameyn karto baradho la shiiday - tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu xakamayn karo zucchini si loogu quudiyo ilmo. Ku raaxeyso cuntada!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Diyaarinta jiilaalka 2019